'Vakaipa Vakafa Vanomuka' Inotanga Kugadzira uye Inogovana Yakanaka Foto - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Vakaipa Vakafa Vanomuka' Anotanga Kugadzira uye Anogovana Yakanaka Mufananidzo
'Vakaipa Vakafa Vanomuka' Anotanga Kugadzira uye Anogovana Yakanaka Mufananidzo
by Trey Hilburn III June 8, 2021 1,899 maonero
Ndinozvitaura nguva nenguva. Zvimwe zvakaipa Dead nhau nhau dzakanaka. Nhau dzichangoburwa dzenhau kubva mu akafa musasa ndowo Vakaipa Vakafa Vanomuka yatanga kugadzirwa… nhasi. Hooray!
Pakutanga ichitendwa kutanga kugadzirwa gare gare gore rino, chaive chinhu chakakura uye chakanakisa kushamisika kuona director Lee Cronin achitumira mufananidzo wakanaka kwazvo kubva kuTwitter yake kuratidza kutanga kwekugadzira Zvakaipa Ris Deade. Bruce Campbell naSam Raimi varipo sevagadziri pane ichi chitsauko; izvo zvichaona vafi vachipinda munharaunda yemaguta uye vosiya miganho yematanda neimba yemba.
Zvenguva izvo kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezve iko mune iyo zvakaipa Dead yekufamba kwenguva simuka zvinokwana. Semuenzaniso, chichava sequel kune yekutanga trilogy yaBruce Campbell - Ashley Williams kubuda kana kuti ingangodaro ichatora kubva pakutangazve? Kana pamwe ichave prequel zvese pamwechete? Chinhu chimwe ndechechokwadi, zvimwe zvakaipa Dead zvakanaka.
Ivo vaviri Lilly Sullivan naAlyssa Sutherland vakagadzirirwa kuita nyeredzi mukati Vakaipa Vakafa Vanomuka uye isu takanakisa dang kufara nezvazvo futi. Lee Cronin uyo akatungamira Horo muvhu, zvino anoisa maziso ake kune vakafa. Mushure mekuona Horo muvhu tiri kubata tariro. Mafirimu akasiyana zvakanyanya. Tichifunga nezve punk rock pacing ye zvakaipa Dead mafirimu uye iyo inononoka kupisa uye glacial kumhanya kwe Horo muvhu. Zvichava zvinonakidza kuona kuti anoendesa sei kune izvo zvinhu. Kufanana nesu tese, Cronin anofarira franchise, saka ndine chokwadi chekuti achaita dangdest yake kutipa chaiyo zvakaipa Dead firimu.
Imi varume munofungei nezve inotonhorera yekugadzira nhau uye pikicha ye Vakaipa Vakafa Vanomuka? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Zuva 1. #EvilDeadRise pic.twitter.com/bWNpC8Ex3b
Rob Zombie akasimbisa kubatanidzwa kwake muThe Munsters pamusoro peUniversal. Verenga zvimwe pano.